Sida loo qoro Qoraal Video ah oo Sharaxa Awood Leh Oo Waxtar Leh | Martech Zone
Jimco, Juun 24, 2020 Jimco, Juun 24, 2020 Douglas Karr
Waxaan ku dhammeynayaa soo saarista sharraxaad muuqaal ah oo loogu talagalay macmiilkeenna toddobaadkan. Waxay ahayd hawl fudud, laakiin waxay ahayd lagama maarmaan in aan hoos u dhigo qoraalka si aan u hubiyo inuu ahaa mid kooban, saamayn leh, oo dhammaystiran intii suurtagal ah si loo hubiyo fiidiyowga sharaxaaha ayaa leh saameynta ugu badan.
Tirakoobyada Fiidiyowga Sharaxa
Celcelis ahaan, daawadayaasha daawo 46.2 ilbidhiqsi oo ah 60-ilbiriqsi video sharaxe
Barta macaan ee dhererka fiidiyowga sharraxaa waa Saacadaha 60-120 oo leh 57% heerka haynta dhagaystayaasha
Faahfaahin fiidiyowyo in ka badan 120 ilbiriqsi kaliya helitaanka 47%
dhegeystayaasha Heerarka haynta ayaa hoos u dhacaya si bayaan ah u dhaafay calaamadda 2-da daqiiqadood
Maalgashiga fiidiyow sharaxe waa mid lama huraan ah haddii shirkadaada ay sii wado halganka si loo sharaxo loona muujiyo geedi socodkeeda iibsadayaasha mustaqbalka. Waxaan jeclaan lahaa in dhammaan macaamiisheennu ay jeclaan lahaayeen maal gasho ugu yaraan hal fiidiyoow sharrax ah. Waxaa jira noocyo badan oo fiidiyowyo sharrax ah - waxaana si siman looga baran karaa raadinta, raadinta fiidiyowga, iyo warbaahinta bulshada.
Kooxda ciyaarta Kibis -dhaaf, shirkad fiidiyoow sharraxe ah, ayaa soo uruurisay faahfaahinta ugu ballaaran ee aan soo arkay oo sharraxaysa sida ugu wanaagsan ee loogu qoro qoraalkaaga fiidiyowga sharraxa ee ku jira macluumaadkan, Xaashida Khiyaanada Aakhirka ee Qoraalka Sharaxayaasha Muuqaallo Video ah. Talooyinka khabiirka waxaa ka mid ah:
Adeegso ereyo isku dhafan oo sharraxi kara
Waxbarto oo maaweelo
Adkeeji hadalkaaga iyo codkaaga
Qor sida aad u hadasho
Codso qaab-dhismeedka sheeko-dhaqameedkii hore
Breadnbeyond waxay xasuusisaa qorayaasha qoraalka inay had iyo jeer xasuustaan waa maxay, ka kuwaas oo, ka sababta, Iyo sida. Taasi waa qaacido aan jeclahay. Qoraalkeygu sida caadiga ah waxay ku bilaabmaan hordhac dabeecad (qof u dhigma dhagaystayaasheena bartilmaameedka ah), dhibaatada ay la ildaran yihiin (the waa maxay), waxyaabaha kale ee suuqa yaala ee aan ku kala saari karno (the sababta), iyo xalka macaamiisheena iyo waliba wicitaan-ficil (the sida).
Waxaan isku dayeynaa inaan labadaba hagno go'aanka iibka iyo sidoo kale inaan u sheegno kala duwanaanta macaamiisheena!
Sharaxaha Qoraalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka ah
Tags: Kibis -dhaafqoraalka muuqaalka sharaxetirakoobka fiidiyowga sharaxaaddasida loosida loo qoro qoraalscriptqoraalka fiidiyowga